China Commercial Tissue Paper Holder Jumbo Toilet Paper Dispenser Stainless Steel ho an'ny Commercial na Home Use Wall Mount for with Key & Lock mpanamboatra sy mpamatsy | Juyuan
Taratasy Tissue ara-barotra Jumbo Toilet Paper Dispenser Stainless Steel ho an'ny fampiasana ara-barotra na trano ampiasaina amin'ny rindrina amin'ny Key & Lock
Item: Jumbo Toilet Paper Dispenser
Item No.: 4AK29
Fitaovana: SUS 304
1. Trano fandraisam-bahiny, trano tsy miankina, trano fisakafoanana, trano birao, trano fisotroana kafe, zaridainam-panjakana, trano fonenana, trano fisakafoanana, fivarotana rojo, tobin-tsolika, ho an'ny daholobe Na azonao atao ny mametraka ny dispenser taratasy fidiovana ara-barotra Saika na aiza na aiza. Ny surface poloney sy ny surface matt dia azo isafidianana, na ny surface poloney na ny surface matt dia afaka manome endrika madio sy maoderina izay hampamirapiratra ny trano fidiovana rehetra.
2. Avo kalitao - Ity Dispenser Taratasy Toilet mivantana azo ianteherana ity dia namboarina avy amin'ny kalitao avo lenta miaraka amin'ny vy tsy misy kilema SUS304, izay mahatohitra, maharitra ary ambany fikojakojana. Ny dispenser servieta vita amin'ny taratasy dia manana fitsaboana malefaka tsy misy scratches, sisiny malefaka tsy misy burrs, ary tsy misy atahorana ho ratra mandritra ny fampiasana. Misy ihany koa ny hidin-trano fiarovana sy ny fampitaovana amin'ny fanalahidy, mba hisorohana ny fanodinkodinana sy ny fanimbana, izay mety amin'ny toerana ho an'ny daholobe.
3. Large capacité: Mitana ny habe lehibe indrindra amin'ny horonana taratasy, miantoka fa ny olona rehetra dia afaka mahazo famatsiana servieta tanana tanana tokana tsy misy famenoana matetika. Mora ny famenoana amin'ny fampiasana ny fanalahidin'ny hidin-trano. Ary tsy mila manahy momba ny fahavoazana ratsy. Misy varavarankely eo anoloana mba hijerena ny habetsaky ny lamba famaohana taratasy, tsy mila manokatra ny sarony mba hanamafisana.
4. Mora ampiasaina - Famolavolana Serrated Bottom izay tsy rovitrao amin'ny tananao ny TP. Misokatra 180 degre ny fonony anoloana mora idirana mba hanamora ny famenoana. Mampihena ny fandaniana ary mitazona ny fahafaham-pon'ny mpampiasa.
5. Karazana fametrahana rindrina rindrina, mila kojakoja visy hapetraka ao amin'ny rindrina, miaraka amin'ny fitaovana fametrahana rehetra sy ny torolàlana amin'ny antsipiriany. Izy io dia miaraka amin'ny kojakoja visy ilaina ho an'ny fametrahana mora, ny fitaovana ilaina rehetra dia ampidirina amin'ny fividianana.
6.100% antoka fahafaham-po amin'ny mpanjifa: Miezaka izahay hanome vokatra avo lenta sy serivisy tsara. Aza misalasala mifandray aminay raha manana olana amin'ity dispenser servieta ity ianao.
teo aloha: C-Fold / Multifold Paper Towel Dispenser - Voaporitra 304 Grade Stainless Steel Wall Mount Tissue Holder ho an'ny Countertop & Toeram-pisakafoanana an-trano sy birao
Manaraka: Fihazonana taratasy fidiovana misy talantalana finday sy fihantonana, Accessories amin'ny efitra fandroana SUS 304 Stainless Steel Tissue Roll Dispenser fitehirizana rindrina
Taratasy tafo fidiovana efitra fandroana tsotra Ro...
Rindrina tsy tantera-drano taratasy mpihazona efitra fandroana P...
Stainless Steel Toilet Paper Roll Holder amin'ny S...
Lohan-doha roa tonta taratasy fidiovana misy talantalana Matt...